Crime against humanity is going on in Oromia/Ethiopia! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsCrime against humanity is going on in Oromia/Ethiopia!
Oromoon mana hidhaa jiru hundi Oromummaa isaa qofaaf yakkamee hidhame. Kan hammeessee mormus kan garaa bal´tee haqa Oromoo irratti garuu hin araaramnes hunduu mana hidhaa jira. Ati gara jabeessas gara laafessas tahi, haqa Oromoof onnee keetirraa falmitetti diina mootummaa Itophiyaa ti. Jawar Mohammed Abiy Haamadiif yeroo haa kenninu, arraba itti hin jabaannu jechuurratti waahillan qabsoo isaa gariidhaan wal dhabaa ture. Jawar hangamuu mootummaa Abiy mormullee hanga gaafa hidhameetti dantaa biyyattii kanaa tiksuu irratti Nafxanyoota har´a aangoo dhuunfatte caalaa beekkomsa, gamnummaa fi gootummaan falmaa ture. Waa´een bishaan guutuu hidha Abbayyaa irratti ejjennoon inni agarsiisaa ture ragaa guddaa dha. Garuu Jawaar dantaa Oromoo falmuu irratti eenyuyyuu waliin waan hin araaramneef maqaan isaa mooraa gamaa keessatti tolee hin beeku. Itoophiyaan osoo biyya eebbifamtuu taatee ilma qaalii akkasii kunuunsitee guddifatti malee hin hiitu ture.
Kana irraa Oromoon waan guddaa barata. itoophiyaa keessatti yakki Oromoo Oromummaa falmachuu qofa. Oromummaa yeroo falmattu bifa fedheenuu deemtu yakkamuu jalaa hin baatu. Kun ammoo akka Oromootti hiree takkittii qabaachuu keenya mirkaneessa.
Bona Bekele Mucaa yeroo darbe umrii malee hidhaatti dararaa turan; Gaafa awwaalcha Haacee Rasaasni diinaa laphee isaa rukutuun Onnee jalatti hafte. Hospitaalli Amboo keessaa baasuu sodaate. mucaa kutaa 9ffaa kan ganna 16 ti. Obboleessi isaa Atinaaf Abdii warra 77’n Haromayaa irraa hari’ame keessaa isa tokkodha. Haalli ummata Amboo irratti deemaa jiru akkaan qaanessaa dha.
Fayyii ka’i Qaxalee koo!
Eessumamoo Adeeraa Artist Hacaaluu Hundeessaa Bikka Gaddaatti Shaneetu Ajjeese Jedhanii Wacabbaraa Hinturree Warri State Mafia kun? Isaan kanaaree Shaneen? Ambotti Reefka Hacaaluu irratti yeroo nama fixan”
Maddi Oduu OMN.
Warra akkanatti ija 👁 #BILXIGINNAA Keessaa baasaa turan Dabballoonni hidhaa jiraachuun dhagayame ❗
Mee Dhaggeeffadhaa gurbaa gowwaa kana! Warra kanatu shaneedhaa?
Abiyyii keenya Abbaa Noobeelii Nageyaa fi Abbaa Dimmirii
Isa akkakee kanaa waliin dubbachuuf fedha hinqabu. Geetaachoo Reddaa.
Yeroo garii akkanatti ija jabaatuun bayeessadha.